တစ်ဦး bootable USB flash drive ကို Windows7ကို UltraISO အောင်လုပ်နည်း
Windows7ကိုယနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံး operating system ဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများကသုံးစွဲသူများအဋ္ဌဗားရှင်း၌ထငျရှားအသစ်က Windows ပြားဒီဇိုင်း, သိဟောင်းမှသစ်စာရှိပေမယ့်နေဆဲသက်ဆိုင်ရာ Operating System ကိုကြသည်မဟုတ်။ သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Windows7ကို-install မိမိကိုယ်မိမိဆုံးဖြတ်လျှင်, သင်လိုအပ်ပထမဦးဆုံးအရာ - Bootable media တစ်ခုလုပ်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။
UltraISO: တစ်က USB flash drive ကိုအပေါ် disc ကို image ကို Burn
တစ်ဦးက disk ကိုပုံရိပ် disk ကိုရေးသားခဲ့ကြသည့်ဖိုင်များတစ်ခုအတိအကျဒစ်ဂျစ်တယ်မိတ္တူဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်အမြဲတစေ discs တွေကိုမှစံချိန်ကိုပြန်လည်ရန်ရှိသည်သော disk ကိုသို့မဟုတ်ဒေတာသိမ်းဆည်းခြင်း, အသုံးမပြုနိုင်သည့်အခါအဆိုပါရုပ်ပုံများကိုကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများတွင်အသုံးဝင်ပါသည်။ သို့သော်ပုံရိပ်တွေမှတ်တမ်းတင်ဖို့မောင်း, ဒါပေမယ့်လည်းချောင်းကိုအပေါ်, ဤဆောင်းပါးသည်ထိုသို့ပြုမှသင်မည်သို့ပြပါလိမ့်မယ်လို့ရပါတယ်သာ။
ပုံရိပ်တွေကွန်ပျူတာမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအလုပ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သာမန်, floppy disks ကိုထိုက်သည်အတိုင်းအပြစ်ပေးသို့သွားကတည်းကကို virtual disk တွေဖြင့်အစားထိုးနေကြပါတယ်။ သို့သော်ကို virtual disk တွေအဘို့ကျမ်းစာ၌လာသည်နိုင်သည့်အပေါ်တစ်ဦးကို virtual drive ကိုသို့မဟုတ် disk ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီမှာကျနော်တို့ကဒီဆောင်းပါးထဲမှာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်ရသော UltraISO အစီအစဉ်ကိုကူညီ။
UltraISO: 121 အမှား device ကိုမှရေးသားခြင်းသည့်အခါ
UltraISO - ဤမကြာခဏသင်ကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုငါသိ၏မဟုတ်လျှင်ဖြေရှင်းမရနိုငျသောပြဿနာဖြစ်သည့်နှင့်အတူအလုပ်မှာအလွန်ရှုပ်ထွေးတူရိယာဖြစ်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့သည်မဟုတ်ဘဲရှားပါး၏တဦးတည်း, ဒါပေမယ့်အလွန်နှောင့်အယှက် UltraISO အမှားစဉ်းစားပါကပြင်ဆင်ရန်။ မှားယွင်းနေသည် 121 ကို USB ကိရိယာတခုတခုအပေါ်မှာ image ကိုမှတ်တမ်းတင်သည့်အခါထုတ်ခုန်နှင့်အတော်လေးရှားပါးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
UltraISO တစ်ဦးကို virtual drive ကို Create
က virtual drive ကိုကို virtual disk ကိုဖတ်ရှုဖို့ဒီဇိုင်းနှင့်နီးပါးမည်သည့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အရေးပါသောကိရိယာဖြစ်ပါတယ်။ Drive ဖြင့်, သင်သည်ဖိုင်တွေနဲ့ disk ကိုရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်သို့မဟုတ် NoDVD တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာအဖြစ်သူတို့ကိုအသုံးပြုပါ။ သို့သော်လူတိုင်းမတစ်ဦးကို virtual drive ကိုဖန်တီးဖို့ဘယ်လိုသိတယ်, ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည် UltraISO အစီအစဉ်တွင်တစ်ဦးကို virtual drive ကိုအတွက်ဥပမာတစ်ခုကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
UltraISO အတွက် image ကို mount လုပ်နည်း
မကြာသေးမီက drives တွေကို ပို. ပို. အချိန်ပြန်သွားကြဖို့ဖြစ်လာကြပါပြီများနှင့်သာမန် disk တွေနှင့် drives တွေကိုရာအရပ်ကို virtual ဖြုတ်မီဒီယာသို့ရောက်ကြ၏။ က virtual disk တွေနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ပုံရိပ်တွေဖန်တီးနိုင်သည့်အတွက်တိကျသောအစီအစဉ်များလိုအပ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုအသုံးပြုရရန် image ကို mount သလော
UltraISO: အမည်မသိ image ကို format နဲ့
အမည်မသိ image ကို format နဲ့ - UltraISO အတွက်အသုံးအများဆုံးအမှားတွေတစ်ခုမှာ။ ဒါဟာအမှားကပိုမကြာခဏအခြားသူများထက်ဖြစ်ပေါ်, ထိုသို့အပေါ်ထိ မိ. လဲအလွန်ရိုးရှင်းသောဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့လူအနည်းငယ်ကသာကဖြေရှင်းပေးဖို့ဘယ်လိုသိကြနှင့်၎င်း၏အကြောင်းမရှိအရာဖြစ်တယ်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်တော်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်။ UltraISO - disk ကိုရုပ်တုဆင်းတုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန် program တစ်ခု, ဤအမှား၎င်း၏အမည်ကိုခြင်းဖြင့်သက်သေအဖြစ်, သူတို့ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်စပ်သည်။
Bug UltraISO ကိုဖြေရှင်းနိုင်: မှားယွင်းနေသည်ရေးသားမှု mode ကိုစာမျက်နှာ setting
အမှားအယွင်းများမကြာခဏဆိုအစီအစဉ်၏အသုံးပြုသူများအတွက်အဆင်မပြေတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်စေခြင်း, UltraISO မျှချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပြင်ပမှာအကူအညီမပါဘဲဖြေရှင်း, ဤအမှားများကိုများထဲမှကြှနျုပျတို့သညျဤဆောင်းပါးအတွက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်အရာနှင့်အတူ«ရေး mode ကိုစာမျက်နှာ setting မှားယွင်းနေသည်»ဖြစ်ပါသည်နိုင်သည့်အသုံးဝင်သော utility ကိုမကြာခဏအမှားများကို။
အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်တစ်ဦး disc ကိုရန် image ကိုမီးမရှို့ဖို့ကိုဘယ်လို UltraISO
အတူအများအပြားအသုံးပြုသူများအကျွမ်းတဝင်ယင်း UltraISO - ဖြုတ်မီဒီယာ, ပုံရိပ်ဖိုင်တွေနဲ့ကို virtual drive တွေကိုများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံး tools များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒီနေ့ပရိုဂရမ်တွင် disc ကိုအပေါ် image ကိုမှတ်တမ်းတင်ထုတ်သယ်ဖို့ဘယ်လိုကြည့်ပါ။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကို UltraISO - သင်ပုံရိပ်တွေနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့ထိရောက်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်, Microsoft Windows နဲ့တစ်ဦး bootable disk ကိုဖန်တီးနေတဲ့ flash drive ကိုသို့မဟုတ် disk ပေါ်မှာမီးရှို့, က virtual drive ကို mount နှင့်ပိုပြီး။
Display ရဲ့အတွင်းတုတ်တွေနဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်း UltraISO
တခါတရံကို USB-flash drive ကိုသတင်းအချက်အလက်သိုလှောင်များအတွက်ခရီးဆောင်ကိရိယာဒါပေမယ့်လည်းကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့အလုပ်လုပ်ဘို့အရေးပါတဲ့ tool ကိုသာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အချို့သောပြဿနာများ debugging အဘို့, ဒါမှမဟုတ် operating system ကို reinstall လုပ်ဖို့။ ဤအင်္ဂါရပ်တုတ်ကဲ့သို့ tool ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ကြောင်း UltraISO အစီအစဉ်ကိုဖြစ်နိုင်ကျေးဇူးတင်စကားဖြစ်ကြသည်။
UltraISO: အမှား၏ပြင်ဆင်ချက်ကို virtual drive ကိုမတွေ့ရှိ
UltraISO တစ်ဦးအသုံးဝင်သောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အခြို့သောရှုထောင့်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်၎င်း၏ functional ဖြစ်စေခဲယဉ်း၏။ အကြောင်းမူကား, ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီသို့မဟုတ်ကြောင့်အမှားပေါ်လာအရာကိုထို့ကြောင့်နားလည်ရန်ခက်ခဲသည်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့မှားယွင်းမှုတစ်ခုရှိသည်အဘယ်ကြောင့် "ဒီကို virtual drive ကိုမတွေ့" နှင့်ဆက်တင်များဖြင့်ရိုးရှင်းတဲ့ထိန်းသိမ်းရေး၏အကူအညီနှင့်အတူကဖြေရှင်းနိုင်မှာကြည့်ပါ။
UltraISO: ဂိမ်းများကို Install
အခုနောက်ပိုင်းမှာကမိတ္တူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတို့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဂိမ်း, ကစားရန်ခက်ခဲဖြစ်လာသည်။ များသောအားဖြင့်ဒီလိုင်စင်အတွက် disc ကိုအပြီးအပိုင် drive ကိုအတွက်ဖြည့်စွက်ရမည်လိုအပ်ကြောင်းဂိမ်းများကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ သို့သော်ဤဆောင်းပါးအတွက်ကျွန်တော် UltraISO အစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ UltraISO - disk ကိုရုပ်တုဆင်းတုနှင့်အတူ, ကိုကိုမီးရှို့နှင့်အခြားအလုပျအတှကျ program တစ်ခု။
UltraISO: တစ်ဦးပုံရိပ် Creating
တစ်ဦးက disk ကိုပုံရိပ် - မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အများအပြားအခြေအနေများတွင်သင်လိုအပ်အံ့သောငှါကို virtual disk ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်အခြား drive ကိုမှထပ်မံမှတ်တမ်းတင်များအတွက် disc ကိုကနေသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ကို virtual drive ကိုဘယ်လို disc ကိုသုံးစွဲဖို့အတွက်ဖြည့်စွက်သောရည်ရွယ်ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်တွင်တစ်ဦးကို virtual drive ကိုပြုလုပ်သုံးစွဲဖို့မလိုအပ်သည့်အခါ။
UltraISO ဆုံးဖြတ်ချက်ပြဿနာ: သင်စီမံခန့်ခွဲသူအခွင့်အရေးများရှိသည်ဖို့လိုအပ်
အသုံးပြုသူအခွင့်အရေးမှားယွင်းနေသည်မရှိခြင်းအများအပြားအစီအစဉ်များအတွက်အလွန်ဘုံဖြစ်တယ်, ကို virtual နှင့်စစ်မှန်သောနှစ်ဦးစလုံး disk တွေနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်တစ်ဦးလူသိများတဲ့ tool ကိုမျှချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ UltraISO ၌ဤအမှား ပို. ပင်မကြာခဏများစွာသောအခြားအစီအစဉ်များအတွက်ထက်ဖြစ်ပေါ်လျက်နှင့်မလူတိုင်းကဖြေရှင်းပေးဖို့ဘယ်လိုသိတယ်။ သို့သော်ဤဒါမခက်ခဲ, ငါတို့သည်ဤဆောငျးပါးတှငျဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်။
UltraISO: တစ် bootable USB drive ကို Windows 10 ကို Creating
နောက်ဆုံးအဖြစ်မှလူသိများသော Windows ၏ဗားရှင်းအသစ်, ယင်း၏ယခင်ကျော်အားသာချက်တစ်ခုအရေအတွက်ကလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်လာခဲ့သည်အသစ်တစ်ခုလုပ်ဆောင်ချက်ကိုရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ပဲပိုပြီးလှပဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ Windows 10 ကိုနှင့်အင်တာနက်တပ်ဆင်ရန်လူသိများသည်အထူး loader မှမလိုအပ်ပေမယ့်လူတိုင်းမအတော်ကြာ gigabytes (8) ဒေတာကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်မတတ်နိုင်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာတိုင်းပင်အကောင်းဆုံးနဲ့အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောပရိုဂရမ်တစ်ခုအချို့ bug တွေရှိပါတယ်မရှိလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ UltraISO ဆက်ဆက်မပါချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုအလွန်အသုံးဝင်သည်, သို့သော်အမှားများကိုအမျိုးမျိုးဖြည့်ဆည်းဖို့နဲ့အမြဲတမ်းအစီအစဉ်ကိုကိုယ်တိုင်ကအပြစ်တင်ရန်မလိုပါမကြာခဏဖြစ်နိုင်ပါကမကြာခဏအသုံးပြုသူရဲ့အမှားမှာတွေ့ကြုံတတ်၏။ ဤအချိန်ကြှနျုပျတို့သညျ "အဆိုပါ disk ကိုအပြည့်အဝသို့မဟုတ်ပုံရိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ " ဟုအဆိုပါအမှားကိုကြည့်
https://termotools.com my.termotools.com © UltraISO 2019